जुकरबर्गमाथि ट्रम्पको अश्लील टिप्पणी - Rastrakokhabar
जुकरबर्गमाथि ट्रम्पको अश्लील टिप्पणी
Mark Zuckerberg, chief executive officer of Facebook Inc., listens as Narendra Modi, India's prime minister, not pictured, speaks duringatown hall meeting at Facebook headquarters in Menlo Park, California, U.S., on Sunday, Sept. 27, 2015. Prime Minister Modi plans on connecting 600,000 villages across India using fiber optic cable as part of his "dream" to expand the world's largest democracy's economy to $20 trillion. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
आफ्ना समर्थक लगाएर संसद भवनमा वितण्डा मच्चाएको आरोपमा प्रमुख सोसल मिडिया प्लाटर्फमबाट प्रतिबन्धमा परेका अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई फेसबुकले पनि सन् २०२३ को जनवरीसम्म प्रतिबन्ध लगाएको छ । ट्वीटरले भने उनीमाथि स्थायी प्रतिबन्ध नै लगाएको छ ।
तर आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सोसल मिडियाप्रति ट्रम्प निकै असहिष्णु र कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । हालै एक अन्तरवार्तााक क्रममा उनले फेसबुक सीईओ मार्क जुकरबर्गप्रति निकै आपत्तिजनक तथा भद्दा टिप्पणी गरेका छन् ।
फक्स न्यूजका ग्रेग गटफेल्डले ट्रम्पसँग लिएको अन्तरवार्ता गत बिहीबार प्रशारण भएको थियो । उक्त अन्तरवार्ताका क्रममा ट्रम्पले जुकरबर्ग तथा प्रविधि कम्पनीका अन्य हाकिमहरु पागल भएको बताए ।
साथै उनले आफू राष्ट्रपति हुँदाका बखत मार्क जुकरबर्ग डिनर खानका लागि ह्वाइट हाउस आउने र आफ्नो फाइदाका लागि निकै चाकडी गर्ने गरेको बताए । ट्रम्पले जुकरबर्गको चाकडीका बारेमा वर्णन गर्दै लाक्षणिक रुपमा भनेका छन् – उनले मेरो नितम्बमा चुम्बन गर्थे ।
उनले भनेका छन् – उनी मेरो नितम्बमा चुम्बन (चाकडी गर्न) गर्न ह्वाइट हाउस आउने गर्दथे । ठीक छ, फेसबुक प्रमुख आफ्नी प्रिय पत्नीसँग म कहाँ आएका हुन्थे त्यतिबेला । उनीहरु आउँथे । ह्वाइटहाउसमा म सँग डिनर गर्दथे । तर अहिले देख्नुभयो नि उनीहरुले म र रिपब्लिकनहरुमाथि के-के गरे । यो वास्तवमै एउटा पागलपन हो । तर संसार यसरी नै चल्दैछ ।
सन् २०१९ मा ट्रम्पले गोप्य रुपमा जुकरबर्ग र फेसबुकका बोर्ड सदस्य पिटर थाइलसँग भेट गरेको सार्वजनिक भएको थियो । थाइल रिपब्लिकन पार्टीका मुख्य दाता हुन् । केही महीना अगाडिको एक अन्तरवार्तामा ट्रम्पले यदि जुकरबर्गले आफूसँग भेट नगरेको भए आफूले त्यतिबेला फेसबुकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्धित गरिदिन लागेको दाबी गरेका थिए ।
त्यस समयमा जुकरबर्गले आफूसँग सम्पर्क गरिरहने गरेको र डिनरका लागि ह्वाइट हाउसमा आएर तपाईं महान हुनुहुन्छ भनेर आफूलाई भन्ने गरेको ट्रम्पले बताएका छन् ।
ट्रम्पले ट्वीटरको सफलताका लागि आफ्नो हात रहेको अर्को अनौठो दाबी पनि गरेका छन् । पहिले असफल रहेको ट्वीटर आफूले खाता खोलेर सक्रिय भएसँगै सफल बन्दै गएको उनको दाबी छ । तर अहिले आफू त्यसमा नहुँदा ट्वीटर पुनः दिक्क लाग्दो प्लाटर्फम बन्दै गएको उनको जिकिर छ ।
९० दिन अन्तरिक्षमा बिताएर फर्किए तीन चिनियाँ अन्तरिक्ष यात्री
इन्स्टाग्राममा नयाँ फिचर
नेपाल टेलिकमले फाइभ जी परीक्षणको तयारी गर्दै
जूमको त्रैमासिक आम्दानी १ अर्ब डलर